Wasiirka Maaliyadda XFS oo shir looga hadlayo arrimaha maaliyadda uga qayb galay Dalka Kuwait – Radio Muqdisho
Muqdisho, Aprili 8, 2015…Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Maaliyadda ee DFS, Mudane Maxamed Aadan Ibraahim (Farkeeti) ayaa gaaray Magaalada Kuwait ee Dalka Kuwait, halkaas oo uga qeyb galay shirka sanadlaha ah ee hay’adaha Maaliyadda wadamada Carabta, kaas oo soconayay muddo labo cisho ah. Wasiirka iyo Wafdigiisa ayaa waxaa Garoonka ku soo dhoweeyay Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kuwait, Mudane Cabdulqaadir Amiin Sheekh iyo Masu’uuliyiin kale ee ka socday Hay’adaha Maaliyadda ee Carabta.
Shirkan oo soconayay muddo laba cisho ah waxaa looga hadlay laba ajande oo kala ah, sidii wadamada xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta ay isaga kaashan lahaayeen fududaynta Canshuuraha bedeecadaha isaga goosha wadama Carabta iyo in wadamada Xubanha ka ah Jaamacadda Carabta ay is-dhaafsi Khibradeed uga sameysan lahaayeen arrimaha la xiriira Canshuuraha Badeecadaha.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Aadan Ibraahim (Farkeeti), oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya ay horumar la taaban karo ka sameysay dhanka Maaliyadda sanadihii ugu danbeeyay, isla markaana dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta looga baahan yahay in ay ka qeyb qaataan horumarinta Adeegyada Maaliyadda ee Soomaaliya si kor loogu qaado kobaca dhaqaalaha ee dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta oo Soomaaliya ay kamid tahay.
“Waxaan dhaqan-gelinay qaab isla xisaabtanka maaliyadda oo hufan, waayo tani waxay naga saacidaysaa hagaajinta dhanka Maaliyadda oo sanadihii danbe dib usoo kabanayay, waxayna dhanka kale kalsooni weyn siinaysa deeq-bixiyeyaasha iyo shirkadaha doonaya inay maal-gashadaan Soomaaliya”ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Mudane Maxamed Aaden Ibrahim.
Gaba-gabedii shirka ayaa waxaa la isku raacay laba arimood oo kala ah in la sii xoojiyo iskaashiga Maaliyadeed ee ka dhaxeeya Wadamada Carabta iyo sidoo kale in xubnaha ka midka ah Hay’adahaan ay kordhiyaan qoondada Maaliyadeed ee ay hadda ku deeqaan Sanduuqyada Lacagta.
Wasiirka Dhallinyarada iyo Isboortiga oo faah faahin ka bixiyay shir uu uga soo qeybgalay Jabuuti "Sawirro"